Coronavirus: Sirdoonka Singapore oo la dagaallamaya fayraska - BBC 1593太阳集团城一切网址 Somali
Image caption Ciidamada Singapore
Dalka Singapore oo ka mid ah meelihii ugu horreeyay ee uu ka dillaacay coronavirus, ayaa sirdoonka waxay baadigoobayaan dad qaba xanuunka si looga karantiilo.
Bartamihii January, koox ka kooban 20 dalxiiseyaal ah oo ka socday magaalada Shiinaha ku taalla ee Guangxi ayaa Singapore u tegay inay ku qaataan sanadka cusub ee Shiinaha. Waxay booqdeen meelaha ugu quruxda badan ee loo dalxiis tago.
Waxay sidoo kale tageen dukaan lagu iibiyo daawo-dhaqameedka Shiinaha, sida saliidda yaxaaska iyo waxyaabo kale oo dabiici ah. Dukaanka wuxuu caan ku yahay dalxiisayaasha ka yimaada Dhulweynaha Shiinaha.
Waxaa u adeegtay haweeney dukaanka joogtay oo tustay waxyaabo kala duwan. Kooxda Shiineeska ah ayaa dalxiiskooda dhammeystay kuna laabtay dalkooda.
Xilligaas, kiisaskii 18-ka ahaa ee coronavirus ee ka jiray Singapore waxaa gebigood laga helay dad ka yimid Shiinaha.
Balse 4-tii February, dowladda Singapore ayaa sheegtay in fayraska uu ku faafay gudaha bulshada dalkaas - dukaanka dawada Shiineeska ee Yong Thai Hang wuxuu ahaa meeshii ugu horreysay ee laga helo, kadib markii haweeneydii iibineysay ay xanuunsatay.
Lahaanshaha sawirka ROSLAN RAHMAN
Image caption Dukaanka uu fayraska ka billowday
Ilaa sagaal qof ayaa dukaankaas ka qaaday fayraska, oo ay ku jiraan seyga haweeneyda dukaanka, cunuggooda oo lix bilood jiray iyo haweeney u shaqeyneysay oo Indonesia ka soo jeedday. Labo kale oo shaqaalaha ka tirsan ayaa sidoo kale xanuunsaday.
Haatan way bogsadeen, balse waxaa darnaan lahayd haddii uusan Singapore ka jiri lahayn barnaamij ballaaran oo lagula soconayo bukaannada iyo sida uu midba kan kale ugu gudbiyay fayraska, iyagoo karantiilaya dadkaas iyo dhammaan dadka ka agdhow si aysan usii faafin xanuunka.
"Waxaanu noqon lahayn sida Wuhan," waxaa sidaas yiri Leong Hoe Nam, oo ku takhasusay cudurrada faafa kana shaqeeya isbitaalka Mount Elizabeth Novena, sidoo kalena la taliye u ah dowladda Singapore. "Isbitaalladu way buuxdhaafi lahaayeen."
Image caption Singapore
16-kii March, Singapore waxay xaqiijisay 243 kiis balse wax dhimasho ah ma jirin. Ilaa 40百分比 ka mid ah bukaannadaas talada ugu horreysa ee ay heleen waxay ahayd wasaaradda caafimaadka oo kula talisay in la baaro kaddibna la karantiilo.
Guud ahaan, 6,000 oo qof ayaa ilaa iyo haatan la baaray halka ay xanuunka ka qaadeen, iyadoo la adeegsanayo muuqaalka ay duubtay kaamirada CCTV , baaritaanka booliiska iyo baaritaanno kale sida wicitaannada dadka.
Telefoon uu soo diray qof aan la aqoon
Maalin Sabti ah oo ay cadceeddu kululeyd ayaa waxaa telefoonka soo wacay qof aan la aqoon, wicitaankaas ayaa ka caawiyay Melissa (magaceeda saxda ah maaha) oo ah macallimad u dhalatay Britain oo dalkaasi ku nool inay ogaato inay khatar ugu jirto fayraska.
Waxay sheegtay inay la yaabtay markii ay telefoonkeeda ku aragtay nambar aan la aqoon.
"Waxay i weydiiyeen ma waxaad saarneyd taksi Arbacadii saacaddu markii ay ahayd 18:47?' way iska caddeyd. Waan yara walaacay, si toos ah uma fekeri karin."
Melissa waxay durba soo xusuusatay inay saarneyd taksiga la sheegay, waxayna gadaal ka ogaatay inuu keliya ahaa safar qaatay lix daqiiqo. Ilaa iyo hadda, ma oga inay fayraska ka qaadday darawalka amaba qof kale oo gaariga soo raacay.
Waxa keliya ee ay ogtahay waa in qofka soo wacay uu ahaa sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka Singapore, kaas oo u sheegay inay tahay inay guriga joogto lana karantiilo.
Image caption Shaqaalaha caafimaadka oo dadka wacaya
Maalintii xigtay waxay Melissa ogaatay in saraakiishu ay dhab ka ahayd. Saddex qof ayaa gurigeeda yimid kuwaasoo xirnaa jaakado iyo maaskarada wejiga."Sida filin oo kale ayay ahayd," ayay tiri. "Waxay i siiyeen amarka karantiilka, oo ah inaan aadi karin meel gurigeyga ka baxsan haddii kalena la i xiri doono ama la i ganaaxi doono."
Labo toddobaad kaddib, Melissa laguma arkin calaamadaha Covid-19 waxaana loo oggolaaday inay gurigeeda ka baxdo.
Dalka Singapore, waa mid ka mid ah dalalka ugu bulshada badan, qof xanuunka qaba oo aan la ogaan ayaana si xowli ah u faafin kara.
Sida ay sirdoonka u shaqeeyaan
1. Kiiska qof qaba xanuunka: Waxaa bilaabaya in qofka lala xiriiro
2. Wareysi: Si loo ogaado qofka uu xiriirka la yeeshay bukaanka
3. In la xaqiijiyo: In la waco dadkaas, booliiska ayaa laga yaabaa inay arrinta soo farageliyaan
4. In la soo helo dadka uu la xiriiray bukaanka: Dadka khatarta ugu badan gu jira fayraska
5. In la karantiilo: Dadka uu bukaanka la xiriiray ee aan lagu arkin calaamadaha fayraska ayaa la karantiilaa muddo 14 maalmood ah, halka kuwa calaamadaha lagu arkana la go`doomiyo lana baaro.
6. In lala socdo: Dadka aan khatarta badan ug jirin fayraska ayaa telefoonka lagula socdaa muddo 14 maalmood ah